AmaNgqina KaYehova​—Ingxelo Yonyaka ka-2016
Kumadabi abaye bawalwa kwezomthetho nakwiinzingo abatyhubele kuzo, abazalwana noodade wethu babonisa ngokucacileyo ukuba abagungqi tu kuYehova uThixo. Umzekelo wabo ufanele usikhuthaze sonke ukuba sibe nokholo olomeleleyo siqinisekile ukuba “uYehova uya kumahlula onyanisekileyo wakhe.”—INdu. 4:3.
EARGENTINA | Ilungelo Lokufundisa Abantwana Ngonqulo
URuth wakhuliswa ngamaNgqina kodwa ke waphola esemncinci. Emva kwexesha waqalisa ukuthandana nenye indoda baza baba nomntwana oyintombi. Ngenye imini uRuth wayekwidolophu yaseLa Plata xa wabona amaNgqina eshumayela ngetroli waza wakhumbula ukuba naye wayekhe waliNgqina. Wabuyela ebandleni waza waqalisa ukufundisa intombi yakhe iBhayibhile. Utata wale ntombi akazange ayithande le nto ibe wamangalela uRuth enkundleni esithi makayeke ukufundisa intombi yabo iBhayibhile okanye ukuya nayo kwiintlanganiso.
Igqwetha likaRuth lathi bobabini abazali banelungelo lokufundisa umntwana ngonqulo lwabo, ibe inkundla ayifanele izifake kwezo zinto ngaphandle kokuba kukho ubungqina bokuba le nto ayifundiswayo umntwana iza kumenzakalisa. Inkundla yathi abazali bafanele balihloniphe ilungelo lomntwana lokukhonza ngokukhululekileyo, nangona wayeneminyaka emine kuphela ngelo xesha! Inkundla yezibheno yona yathi lo mntwana mncinane gqitha ukuba angazenzela izigqibo ngonqulo ibe bobabini abazali banelungelo elifanayo lokumfundisa ngonqulo.
Umntwana kaRuth uyifunda rhoqo ngorhatya iBhayibhile ibe uya kwiintlanganiso nonina. Ukujonge ngamehlo abomvu ukutyelela iBheteli eseBuenos Aires.
EAZERBAIJAN | Ilungelo Lokunqula Ekuhleni
Umpostile uPawulos wayiqaphela into yokuba kwibandla lamaKristu, “ukuba ilungu elinye liyabandezeleka, onke amanye amalungu abandezeleka kunye nalo.” (1 Kor. 12:26) Le nto iye yacaca okwekati emhlophe ehlungwini njengoko amaNgqina kaYehova emhlabeni wonke ebesizela uDade Irina Zakharchenko noValida Jabrayilova baseAzerbaijan. NgoFebruwari 2015 abasemagunyeni batyabeka aba dade ngesityholo sonqulo olungekho mthethweni. Ijaji yathi baza kuxoxa bevalelwe, ibe ngenxa yokuba eli tyala belimane lirhoxiswa aba dade bachitha ixesha elingangonyaka entolongweni, apho babephethwe kakubi.
EAzerbaijan: UValida Jabrayilova noIrina Zakharchenko
Xa lade laxoxwa ityala labo ngoJanuwari 2016, ijaji yabafumana benetyala yaza yathi mabahlawule imali, kodwa ke yaphinda yasixhoma eso sigwebo, yaza yabakhulula, kuba babesele bechithe ixesha besentolongweni. Xa iNkundla Yezibheno YaseBaku yasichitha isibheno sabo, babhenela kwiNkundla Ephakamileyo. Baphinda bamangala nakwiKomiti Yamalungelo Abantu yombutho Wezizwe Ezimanyeneyo ngokuphathwa kwabo kakubi nokunyhashwa kwelungelo labo lonqulo.
Aba dade basachacha emva kwale ntlungu. Bayixabisa gqitha indlela abaye bathandazelwa ngayo kunye nenkxalabo yabazalwana. UDade Jabrayilova wabhalela iQumrhu Elilawulayo esithi: “Imithandazo yenu isincedile sakwazi ukunyamezela, ibe kwakungathi ndiyaniva nisithandazela. Soze ndilulibale uthando lwenu, nendlela uYehova kunye nabazalwana noodade wethu abasehlabathini ababonise ngayo ukuba bayasithanda.”
E-ERITREA | Basentolongweni Ngenxa Yokholo Lwabo
NgoJulayi 2016 urhulumente wase-Eritrea ebesele evalele amaNgqina KaYehova ayi-55 ngenxa yokholo lwawo. Abazalwana abathathu—uPaulos Eyassu, uIsaac Mogos noNegede Teklemariam—bebesentolongweni ukususela ngoSeptemba 1994, ibe urhulumente ebevalele abanye abasithoba kangangeminyaka elishumi.
NgoJanuwari 2016 kwabonakala imitha yelanga xa inkundla yaxoxa ityala lamaNgqina KaYehova awayebanjwe eSikhumbuzweni eAsmara ngoAprili 2014. Kaloku amaNgqina ayeqala ngqa ukubekwa ityala ngokusemthethweni aze afumane nethuba lokuzithethelela. Njengoko kwakulindelwe, abaninzi kubazalwana noodade bafunyanwa benetyala lokuya kwintlanganiso ekwathiwa ayikho mthethweni, bahlawuliswa imali baza bakhululwa. Noko ke, uSaron Gebru, omnye woodade ababebekwe ityala wala ukuhlawula imali. Ngenxa yoko wagwetywa iinyanga ezintandathu entolongweni. Abantu bebevumelekile ukutyelela uDade Gebru kanye ngeveki ibe uthi ebephethwe kakuhle. Yena kunye namanye amaNgqina ayi-54 asentolongweni bayixabisa gqitha imithandazo eyenziwa egameni labo, njengoko sonke ‘sibakhumbula abo bakwimixokelelwane yentolongo ngokungathi sibotshwe kunye nabo.’—Heb. 13:3.
EJAMANI | Inkululeko Yonqulo—Nokwamkelwa Ngokusemthethweni
NgoDisemba 21, 2015, iphondo laseBremen, elikumntla-ntshona weJamani lade lavuma ukuwamkela ngokusemthethweni uMbutho WamaNgqina KaYehova AseJamani. Le nto yenzeka emva kweminyaka emine kuxoxwa amatyala kwiinkundla zaseJamani. Emva kwesigqibo seNkundla Ephakamileyo yaseBerlin, amaninzi kumaphondo ayi-16 aseJamani awanika amalungelo angakumbi amaNgqina KaYehova. Noko ke, iziphathi-mandla zaseBremen zona zala, phofu zihlohlwa lo moya ngabachasi.
Ngo-2015, Inkundla Yomgaqo-siseko YaseJamani yathi iBremen inyhashe amalungelo amaNgqina akumgaqo-siseko ngokwala kwayo ukuwanika amalungelo angakumbi. Esi sigqibo sibonisa ngokucacileyo ukuba imithetho yenkululeko yonqulo ebhalwe kumgaqo-siseko iyawukhusela umsebenzi wamaNgqina KaYehova aseBremen. Amabandla alapho anelungelo lokungayihlawuli irhafu nawokuxhamla kwamanye amalungelo afunyanwa ziicawa ezinkulu zaseJamani.
EKYRGYZSTAN | Ilungelo Lokunqula Ekuhleni
NgoMatshi 2013 abasemagunyeni eOsh, eKyrgyzstan bazipheka zavuthwa izityholo zobuxoki nxamnye no-Oksana Koriakina nonina uNadezhda Sergienko. Umtshutshisi wathi la maNgqina mabini akhuthuze abantu ngoxa ebafundisa ngeBhayibhile, ibe ijaji yawagweba ukungaphumi endlini ngoxa kusaxoxwa ityala lawo. Ngo-Oktobha 2014, inkundla yafumanisa ukuba ubungqina beli tyala babuphekiwe, ibe akuzange kulandelwe inkqubo esemthethweni, yaza yabafumanisa bengenatyala aba dade. Nenkundla yezibheno yema neso sigwebo ngo-Oktobha 2015.
Noko ke, umtshutshisi waseOsh wabhenela kwiNkundla Ephakamileyo yaseKyrgyzstan. Le Nkundla yasichitha isigwebo sokuba aba dade abanatyala yaza yathi maliqalwe phantsi ityala. NgoAprili 2016, amagqwetha aba dade athi malichithwe eli tyala kuba ixesha lokuxoxwa kwalo lalisele ligqithile. Ijaji yavuma yaza yalichitha.
Kuyo yonke le nto aba dade bebonwabile. UDade Sergienko wathi: “Abantu badla ngokucaphuka xa bephethwe kakubi, kodwa ndiye ndayibona indlela uYehova asithanda nasikhathelele ngayo esebenzisa abazalwana noodade. Zange sakha saziva sishiywe enyanyeni.” Aba dade bazibonela ngokwabo ukuba uYehova usaqhubeka esigcina isithembiso sakhe esikuIsaya 41:10, esithi: “Musa ukoyika . . . Ndiza kukubamba nkqi ngokwenene ngesandla sam sasekunene sobulungisa.”
EKYRGYZSTAN | Inkululeko Yonqulo—Nokwamkelwa Ngokusemthethweni
NgoAgasti 9, 2015, amapolisa alishumi angena ngetshova kwiintlanganiso zebandla laseOsh eKyrgyzstan. Athi loo ntlanganiso mayichitheke ngoko nangoko, egrogrisa ngokudubula abantu abangaphezu kwe-40 ababelapho. Amapolisa asa abazalwana abalishumi kwisikhululo samapolisa, apho abasithoba babethwa baza bakhululwa. Kwiintsuku ezimbini kamva, amapolisa abamba uNurlan Usupbaev, omnye wabazalwana ababebethelwe ugqirha nezicaka aza amtyhola ngokuqhuba inkonzo yonqulo olungekho mthethweni.
Xa ityala likaMzalwana u-Usupbaev laxoxwa kwiNkundla YaseOsh, ijaji yalichitha elo tyala isithi akukho bungqina. Umtshutshisi wabhenela kwiNkundla Yenqila, ibe yona yathi uMzalwana u-Usupbaev akanakuba netyala lokunqula ngokungekho mthethweni kuba amaNgqina KaYehova abhaliswe ngokusemthethweni eKyrgyzstan.
Umtshutshisi akazange ancame, kodwa wabhenela kwiNkundla Ephakamileyo YaseKyrgyzstan. Kwathi xibilili kuMzalwana u-Usupbaev xa le nkundla yalichitha eli tyala ngoMatshi 2016, isenza izigqibo eziwabeka kwindawo entle amaNgqina, kwaye isenza kucace ukuba amaNgqina KaYehova anelungelo lokunqula eKyrgyzstan. Iinkundla zisaxoxa isimangalo esafakwa ngamaxhoba nxamnye namapolisa aseOsh.
ERASHIYA | Inkululeko Yonqulo
Nangona imibutho elwela amalungelo abantu ithetha phandle, urhulumente waseRashiya usaqhubeka ehlasela amaNgqina KaYehova. Ukugqibela kwethu, abasemagunyeni bebesithi iincwadi zethu eziyi-88 zifundisa izinto ezibaxiweyo ibe bayivalile newebhsayithi yamaNgqina KaYehova ethi-jw.org. Ngo-2015, abasemagunyeni bala ukuvumela ukungeniswa kweNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele kwelo lizwe, ibe inkundla yaseVyborg isadl’ amathambo engqondo izama ukubona ukuba akunakuthiwa le nguqulelo yeBhayibhile yeyoobhorel’ ecaleni na! NgoMatshi 2016 uMtshutshisi Omkhulu wasongela amaNgqina KaYehova esithi uza kuyivala iofisi yawo eseSolnechnoye cebu kuhle e-St. Petersburg, ewatyhola ngokunqula ngendlela ebaxiweyo.
Zikho iindaba ezimnandi, nangona urhulumente walapho ebhinq’ omfutshane esilwa namaNgqina KaYehova. Ngo-Oktobha 2015, omnye umtshutshisi wafaka isicelo sokuvala uMbutho wamaNgqina aseTyumen, ekumgama weekhilomitha eziyi-2 100 kwimpuma yeMoscow. Nangona kwakukho ubungqina bokuba amapolisa aye abupheka ubungqina nxamnye namaNgqina, iNkundla Yenqila YaseTyumen yawufumana unetyala umbutho wamaNgqina alapho. Noko ke, ngoAprili 15, 2016, iNkundla Ephakamileyo YaseRashiya yasijika isigwebo sale nkundla, isithi “akukho zizathu zibambekayo zokuwuvala uMbutho wamaNgqina KaYehova aseTyumen.” Xa ijaji yafunda isigwebo sayo, abazalwana noodade abayi-60 ababelapho bema ngeenyawo baza batsho ngentswahla.
Abakhonzi bakaYehova eRashiya bazimisele ukuqhubeka bemkhonza enoba ‘kuyilwa siphi isixhobo nxamnye [nabo].’—Isa. 54:17.
IRASHIYA IHLASELA INKULULEKO YONQULO
IINCWADI EZIYI-88 ZAVALW’ UMLOMO
IWEBHSAYITHI YETHU YAVALWA
IZAKHIWO ZONQULO NEMPAHLA YATHINJWA
ZONKE IINCWADI ZONQULO AZIVUNYELWA UKUBA ZINGENE KWELO (ZIYOXUTHWA)
KWIINYANGA EZISIBHOZO ZOKUQALA NGO-2016:
ABASEMAGUNYENI BAGROGRISA NGOKUVALA IOFISI YENTLANGANO
16 BAFUNYANWA BENETYALA
34 AMAKHAYA NEZAKHIWO ZONQULO EZAGQOGQWAYO
30 IZIHLANDLO EKUGQOGQWE NGAZO
ERWANDA | Ilungelo Lokufunda Ngaphandle Kokucalulwa Ngenxa Yonqulo
Kutshanje, abantwana bamaNgqina eRwanda baye bagxothwa ezikolweni ngenxa yokwala ukuba nenxaxheba kwizinto zonqulo nezokuthanda ilizwe. NgoDisemba 14, 2015, urhulumente wakhupha umyalelo ophelisa ucalulo lonqulo ezikolweni, ngelizama ukulungisa le ngxaki. Lo myalelo uthi izikolo mazilihloniphe ilungelo labafundi lonqulo.
NgoJuni 9, 2016, icandelo Lezendaba kwi-jw.org lapapasha inqaku elalinomxholo othi, “IRwanda Izama Ukuphelisa Ukucinezelwa Kwabantwana Besikolo Ngokonqulo.” Eli nqaku laphuma nakwelinye iphephandaba laseRwanda elikwi-intanethi. Kungekudala, eli phephandaba lalisele lifundwe ngabantu abangaphezu kwe-3 000 ibe abafundi abaninzi babethethe kakuhle ngale nto yenziwe ngurhulumente. AmaNgqina aseRwanda ayawubulela lo mthetho oqinisekisa ukuba abantwana bawo baza kufunda kakuhle ngaphandle kokucalulwa ngokonqulo.
ERwanda: Babuyela esikolweni
KUMZANTSI KOREA | Ilungelo Lokungayi Emkhosini Ngenxa Yesazela
Sele kudlule iminyaka eyi-60 ngoku amaNgqina aseMzantsi Korea angabafana abaphakathi kweminyaka eyi-19 neyi-35 ejongene nomba wokuya emkhosini. Urhulumente waseMzantsi Korea akayamkeli into yokuba umntu angangayi emkhosini ngenxa yesazela ibe akanawo omnye umsebenzi onokwenziwa ngabantu abanjalo. Kwezinye iintsapho, utatomkhulu, unyana kunye nomzukulwana, bonke bakhe babanjwa ngaxa lithile ngenxa yokwala ukuya emkhosini.
INkundla Yomgaqo-siseko isikhuphe kwada kwakabini isigwebo sokuba kusemthethweni ukunyanzela abantu ukuba baye emkhosini. Noko ke, iinkundla ezingaphantsi kwayo kunye nabantu abaye babanjwa ngenxa yalo mthetho baphinde bawubuyisela kule Nkundla Yomgaqo-siseko lo mba. Ngenxa yoko, ngoJulayi 9, 2015 le nkundla yaphulaphula amagqwetha abo bangafuniyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela. UMzalwana uMin-hwan Kim owathothoza iinyanga eziyi-18 ngenxa yokwala ukuya emkhosini uthi: “Ndiye ndohlwaywa ndaza ndakhululwa entolongweni. Kodwa ndinethemba lokuba abanye abalayo ngenxa yesazela abayi kohlwaywa. Ukuba bayavunyelwa benze omnye umsebenzi ongenanto yokwenza nomkhosi, baya kukwazi ukufaka isandla kwiindawo abahlala kuzo.” Kungekudala, iNkundla Yomgaqo-siseko iza kukhupha isigwebo sayo.
ETURKMENISTAN | UBahram Hemdemov
UMzalwana uHemdemov oneminyaka eyi-53 unomfazi noonyana abane. Ngumdala omthanda ngentliziyo yonke uYehova kwaye uyahlonitshwa nakwindawo ahlala kuyo. NgoMeyi 2015, wagwetywa iminyaka emine esebenza nzima entolongweni ngenxa yokuqhuba inkonzo ekwathiwa ayikho mthethweni, ekhayeni lakhe. Uvalelwe kwintolongo edume ngokuwatsalisa nzima amabanjwa kwidolophu yaseSeydi, apho usoloko ephekwa esophulwa ngemibuzo kwaye ubethelwa oogqirha nezicaka ngabasemagunyeni. Noko ke, yena nentsapho yakhe basabambelele nkqi kuYehova uThixo. Umfazi wakhe uGulzira uyakwazi ukumtyelela aze amkhuthaze.
Siyabathandazela abantu bakaYehova njengoko sibona ukuba abagungqi ekumkhonzeni nangona betshutshiswa. Umzekelo wabo wenza nathi sibambelele nkqi kuThixo wethu, sithembele kwisithembiso sakhe esikwiNdumiso 37:28 esithi: “Akayi kubashiya abanyanisekileyo bakhe.”
Ngaba Kuza Kwenziwa Ubulungisa Kumaxhoba Enkohlakalo Yamapolisa EOsh?